Zinedine Zidane Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Home KUBBADA CAGTA EE CLASSIC Zinedine Zidane Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
LB waxay soo bandhigeysaa sheekada Full Story of Legend Football waxaa sida ugu wanaagsan loo yaqaan Nickname; 'Zizou'. Our Zinedine Zidane Childhood Story Story iyo Warqadaha Aan Baadhista Xaqiiqooyinka waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ka mid ah dhacdooyinka la arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxaa ku jira sheekada nolosha ee Zinedine Zidane ka hor inta faankii, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan la garanayn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay waxa uu awood u leeyahay, laakiin taageerayaal yar ayaa ka fikiraya Zinedine Zidane Biography Sheeko taas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, bilaabi.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Sanadaha Hore
Zinedine Zidane Photo Childhood
Zinedine Yazid Zidane wuxuu ku dhashay 23rd ee June 1972 ee Marseille, Faransiiska u dhashay Smaïl Zidane (aabaha) iyo Malika (hooyo) labadaba Alcerian.
Zidane wuxuu ku soo koray magaalada La Castellane, oo ah dhismo guracan oo ku yaala magaalada Marseille, oo ah magaalo deked ah oo ku taal koonfurta France. Jiritaanka denbi-falka, shaqo-la'aanta iyo heerka is-daba-joogga ayaa aad uga sarreeya xaafadaha muhaajiriinta.
Aabihii, Smail Zidane wuxuu ahaa shaqeeyn joogto ah sida ilaaliye dukaanka oo habeenkii ah, inkasta oo qoysku uu ku noolaan lahaa meel adag oo aan la wadaagin - dhammaan toddoba way wada fadhiisan karaan oo cunayaan. Tani waxay u horseeday dhalinyaro Zizou inay horumariyaan dadaal lagu joojinayo saboolnimada qoyskiisa.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Shaqo-bilaabid
Waxaa loo soo bandhigay ciyaaraha kubadda cagta markii ay da'diisu ahayd shan jir oo ay la socdaan caruurta xaafadaha ku hareereysan. Waqtigaas, ma jirin wax rajo ah oo ku saabsan Migrantiga Faransiiska Faransiiska ah ee ciyaarta. Dhibaatada, Zizou wuxuu ahaa mid tusaale u ah dadka kale inay raacaan.
Saaxiibadiisa soogalootiga ah, kubada cagta ayaa aheyd isboorti si ay u dhaafto waqti. Zizou qudhuu, kubbada cagta wuxuu ahaa isku day lagu joojinayo faqriga ka dhashey qoyskiisa iyo dadka jecel. Wakhti ma qaadin ka hor intuusan bilaabin bilowgiisa hore ee lagu qabto indhaha kubada cagta. Sidaa daraadeed isku daygiisii ​​uu ku diiwaan galin lahaa naadiga kubada cagta ee dhalinyarada ayaa yimid heer sarre. Zizou ayaa ka diiwaangashan kooxda kubadda cagta ee Saint-Henri ee sanadka ee 1981.
Maaddaama uu yahay muhaajiriinta kaliya ee Aljeeriya ee ka ciyaara naadiyada, Zizou waxa uu si joogto ah u sameeyay mawduucyo jinsi ah iyo jees jees ah oo ku saabsan asalkiisa ghetto asalkiisa iyo kuwa soo horjeeda. Wuxuu u dhegay dhagaha dhegta. Waxa uu qaatay bedelkii uu kooxda ka tagay ee LA Septèmes-les-Vallons halkaas oo uu ka soo ciyaaray 1983 ilaa 1986. Hawlgale kale oo Cannes ka socda 1986. Waxa uu ku soo gabagabeeyay xirfaddiisa dhalinyarada halkaas oo 1989. Waxa uu bilaabay xirfadiisa dhalinyarad ahaan xNUMX laakiin wuxuu markii dambe u dhaqaaqay doorka 9.
Dhalinyarta Zidane - Dhalinyaro ilaa Sare Shaqo
Dhagaxyada dhegaha ah ee cunsuriyada ma aysan dhicin kadib markii uu ku biiray kooxda weyn ee kooxda Cannes. Waxa uu qaatay doorashadii uu kula dagaallamay kuwii isaga qalday. Tani waxay keentay in la jahawareer galo inta uu sanadka intiisa badan ku qarash gareeyey nadiifinta waajibaadka nadiifinta sida ciqaabta loogu talagalay ciyaartoyda jilicsan ee ku jeesjeesay meesha uu ka yimid.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Nolosha Qoyska
Zinedine Zidane wuxuu ka yimid qoys qadarin ah. Si ka duwan dadka xaafadda, qoyska Zidane waa mid ixtiraam badan. Waxay ku noolaayeen nolol macquul ah oo dib u soo noqnoqon leh ka dib marka loo eego kuwa kale ee ku lug lahaa dambiyada culus waxayna ahaayeen asal ahaan shaqo la'aan.
Aabihiis oo sawirka hoose ku sawiray wuxuu ahaa shaqaale hore oo ka shaqeyn jiray xirfad. Waxa uu ka fariistay ka dib markii wiilkiisa uu kubad ka sameeyay.
Zinedine Zidane Aabaha - Smaïl Zidane
Hooyadiisa Malika Zidane, oo sawirka hoose ku yaal ayaa ahaa qofkii hore Malika Zidane ayaa sidoo kale ka fariistay markii wiilkeedu uu kubadda cagta ka dhigay.
Zinedine Zidane hooyadii - Malika Zidane
KOOXAHA: Zinedine Zidane wuxuu leeyahay walaalaha 3 guud ahaan sawirrada hoose.
Zinedine Zidane Brothers
Madjid Zidane (bidix), Farid Zidane iyo Sagaal Goolhayaha Noureddine Zidane ayaa la midoobaya qoyska Zidane oo ku yaala 7 May 2006 oo ku yaala garoonka Zinedine ee garoonka Santiago Bernabeu. Saddexda walaalaha ee "Zizou" ayaa si isku mid ah ugu lug leh maareynta arimahiisa sida ciyaaryahan iyo tababaraha labadaba.
KALSOON: Zinedine Zidane oo ah hooyo yar oo magaceeda lagu magacaabo Lila Zidane.
Zinedine Zidane Sister - Lila Zidane
Lila ayaa sidoo kale ku lug leh maamulka shirkadda Zidane. Waxay u xilsaaran tahay inay maamusho xuquuqdiisa muuqaalka.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Nolosha Xiriirka
Zinedine Zidane Love Story ayaa halkan ka bilaabanaya. Da'da 17, Zidane ayaa la kulmay xaaskiisa mustaqbalka, Véronique Fernández (oo ku dhashay Aveyron ee Isbaanish ah), isagoo u ciyaara Cannes xilli ciyaareedkii 1988-89. Waxay qabeen waxa ay dadku ugu yeeraan "True Love".
Markii Zinedine Zidane laga helay Jacayl
Veronique Fernandez Lentisco waa qoob-ka-cayaar iyo qaab ka hor inta aan loo aqoonsan xaaska mid ka mid ah kuwa ugu weyn kubada cagta taariikhda! Waxay qurux badan tahay Veronique Fernandez Lentisco guursaday Zinedine Zidane oo ah ciyaaryahan kubada cagta ciyaaraha ka fariistay Waxay guursadeen 1994.
Zinedine Zidane Love Story with Veronique Fernandez Lentisco
Midhaha guurka waxay bilowday sanad kadib. Waxay haystaan ​​afar wiil sida waqtiga qorista. Enzo Alan Zidane Fernández wuxuu ku dhashay 24 March 1995, Luca Zinedine Zidane Fernández (oo dhashay 13 May 1998), Theo Zidane Fernández (wuxuu dhashay 18 May 2002), iyo Elyaz Zidane Fernández (oo dhashay 26 December 2005).
Zinedine Zidane Nolosha Qoyska - Caruurta
Dhammaan afarta wiil ee Zidane ayaa dhex maray Akadeemiyada Real Madrid. Wiilkiisa kowaad, Enzo waa khadka dhexe halka Luca uu yahay goolhaye. Theo iyo Elyaz sidoo kale waa khadka dhexe.
Veronique iyo Zinedine waxay isku dhafan yihiin dhumuc iyo dhuuban in ka badan tirooyinka 20. Da'da uu bilaabay inuu lumiyo timaha madaxa. Wuxuu yiri waqtigaas: "Naagtaydu way i jeceshay sidaas oo kale, sidaa daraadeed maahan dhibaato"
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Maxaa Lagu Xusuusanayo
Xaqiiqooyinka Zinedine Zidane - Maxaa loo xusuustaa
Zidane waxaa laga yaabaa inuu u ekaado mid ka mid ah dadka ugu degan adduunka, laakiin taasi waa run ka fog. Waxa uu ahaa mid aad u caan ah dabeecadiisa dabiiciga ah - taas oo ah, sida laga soo xigtay qaar ka mid ah, wuxuu ku qiimeeyaa abaalmarin kale oo adduunka ah.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Kaarka Cas ee Caawinta Bulshada
Maxaa dhacaya markaad hesho kaarka cas ee ciyaaraha kama dambaysta ah ee xirfaddaada ee la siiyay inaadan u adeegi karin ganaaxa madaama aadan ciyaaryahan aheyn midaasna ma ciyaari doonto? Waxaad qabtaa adeeg bulsho. Tani waxay ahayd kiiska Ziouou.
Xaqiiqooyinka Zinedine Zidane - Adeega Bulshada
Kadib 'Zizou' ayaa casaan qaatay ka dib markii uu madax ku dhaliyay Marco Materazzi, wuxuu lahaa inuu sameeyo adeeg bulsho tan iyo markii uu ka fariistay kubada cagta. Inkastoo faahfaahinta adeegga bulshada aan la sheegin, waxaa la soo sheegay in uu u adeegi lahaa howlaha bani'aadamnimada ee FIFA. Taas macnaheedu waa inuu ku dhufan lahaa wadooyinka ama nadiifiyaa musqulaha, yaa garanaya?
Laakiin waxa aan ognahay waa in haddii aad hesho casaan kubbadda ugu dambeeya ee xirfad-yaqaanimada ku saabsan dhaqanka rabshadaha, waxaad hubinaysaa in cadaabta aysan ka heli doonin iyada oo bixinta ganaax kaliya.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Diiwaanka Caadiga ah
Inuu sii wado qodobbada kor ku xusan ee ku saabsan dabeecad xumada, Zidane wuxuu leeyahay rikoorkii kale ee hoos yimaada magaciisa - wax uusan u jeclaan laheyn.
Sida uu u ciyaarayay kulankiisii ​​labaad ee Koobka Adduunka ee ka dhacay Sacuudi Carabiya ee 1998, Faransiiska-Algeria ayaa soo bandhigay mid kale oo ka mid ah falsafadiisa sida uu ku dhuftay Fuad Anwar. Garsooraha ma uusan dhicin markii garsooraha uu soo saaray casaan toos ah oo uu sameeyay Zidane, taasoo ka dhigeysa ciyaaryahanka ugu horeeya ee Faransiiska ah inuu casaan qaato ka dib markii uu casaan qaatay kulankii Koobka Adduunka.
Xaqiiqooyinka Zinedine Zidane - Taariikhda Kaarka Cas (Red Card History)
Ugu dambeyntiina, wuxuu udub dhexaad u ahaa labadii gool ee finalka tartankan oo u horseeday koobkii ugu horeeyay ee Koobka Adduunka.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Gawaarida Koowaad
Zinedine Zidane Promise baabuurta
Zinedine Zidane ayaa markii ugu horeysay u ciyaaray kooxda Cannes markii uu da'diisu ahayd 18 jir. Madaxwaynaha kooxda ayaa si aad ah u jeclaa kubada dahabka ah ee kubada cagta oo uu u ballan qaaday baabuur isagoo hadiyad ah markii uu goolkiisii ​​ugu horeysay ee kooxda u dhaliyay. Waxa uu ahaa inuu sugo laba sano si uu gacanta ugu helo gaari cusub.
10th Febraayo 1991, wuxuu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee abid ugu goolasha badnaa Nantes ciyaar ka dhacday Cannes isagoo u dhaliyay 2 goolka 1.
Waxay aheyd goolkii ugu horeeyay ee uu goolal u dhaliyey xirfadiisa ciyaareed. Waxa laga yaabaa inuu heysto goolal badan oo uu ka filanayo xiddiga qadka dhexe. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sheegasho ah in uu necbaa in uu ku dhex jiro sanduuqa ka soo horjeeda waxaana kaliya uu jecel yahay inuu ku quudiyo weeraryahanada.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Xaqiiqda Goolka
Dhamaanteen waan xasuustaa Zidane Hore ee finalka Koobka Adduunka 2006. Intaas ka hor, waxaa lagu xasuustaa qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee uu ka hor yimid Brazil finalkii Koobka Adduunka ee 1998.
Zinedine Zidane Xaqiiqooyin
Ciyaartaas oo kale, waxa uu dhaliyay labo gool oo uu u hogaamiyay Les Blues si uu ugu guuleysto Koobka 3-0 ee Brazil. Dad badan ayaa ogaanaya tan. Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo aan ogeyn ayaa ah in labada gool ee uu dhaliyey uu ahaa -waxaana weli ah - kaliya labo gool oo uu abid ka dhaliyey xulalka South America ee heer caalami ah.
Waa xaqiiqo qariib ah oo la siiyay markii uu xirfadiisii ​​ku soo laabtay muddo ka badan toban sano waxaana uu ka soo horjeeday kooxo Laatiinka ah. Si kastaba ha ahaatee, labadan gool ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee uu abid dhaliyay.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Kusoo Badan Kubadda Cagta
Waxa uu yahay Idol si aad u muuqata dhamaanba ciyaartoyda muslimiinta ah ee bilaabay saboolka Europe.
Qaab ciyaareedkiisa xulkiisa ee Koobka Adduunka ee FIFA 1998 ayaa sidoo kale dhiiri geliyay ciyaartoyda Karim Benzema, N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar, Anthony Martial, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele iyo Alexandar Lacazette si ay kubada cagta u qaataan si aad u culus inta lagu jiro dhalinyarada.
Zinedine Zidane Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Diinta Ka-hortagga
Wax kale maahan marka laga reebo sawirkan hoos ku qoran wuxuu sheegayaa inuu yahay muslimiin diin ah.
Intaa ka badan, magaciisa oo dhan magaciisa Christian magacyada mar kale waa is burin iyadoo la tilmaamay isaga oo ah "diin diin ah". Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo yaqaanaa inuu sida caadiga ah sheego Al-Kursi ka hor ciyaar kasta marka uu ahaa ciyaaryahan kubadda cagta ah.
Sheekooyinka dhalinyarada ee Sheekooyinka dhalinyarada ee Sheekha
Mohamed Salah Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 12, 2020
Roberto Carlos Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Arjen Robben Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 23, 2018
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 24, 2020
Sheekooyinka Caruurta ee Santiago Solari Sheeko Xaqiiqo Weyn